TW taxane 50% -75% Bolse, cunto degdeg ah-qaboojiyay, makhaayadaha, cuntooyinka fudud, suugada
TC taxane 50% -75% cunto iyo khudrada, hilibka, maqaayadaha, cuntooyinka fudud, suugada
taxane TF 50% -75% cunto iyo khudrada, hilibka, maqaayadaha, cuntooyinka fudud, suugada
taxane TB 50% -75% cunto iyo khudrada, hilibka, maqaayadaha, cuntooyinka fudud, suugada
Note: The caddaymaha caadiga ah waxaa uun tixraaca, faahfaahinta caadadii manufactures waxaa soo dhaweeyay. More macluumaad faahfaahsan oo ay ka mid yihiin sheet MSDS, miisaanka badan, Cabaynta xaalad, markii hogaanka iyo qiimaha jira oo dhan diyaar la codsado, fadlan riix at codsi oraah, waxaad heli doontaa our reply degdeg ah 24 saac gudahood.
Q1: Waxaan ahay xiiso alaabta aad, laakiin hadda waxaan ahay baxay Shiinaha, ayaa laga yaabaa inaad u bixisaa sumadaha si aad u dalkaygii?
Q2: Sidee baan ku heli karaa tijaabada?
Q3: Ma suurogalbaa in caadadii ku dheggan la design gaar ah?
Q4: Sidee baan u sii daayo karaa lacagta kaa galay?